Curso de birmano > español| Números | Traducción
Curso birmano - Números
Cero သုည / ၀ - thoN ŋya
Dos နှစ် / ၂ - nhit'
Tres သုံး / ၃ - thouN
Cuatro လေး / ၄ - léi
Cinco ငါး / ၅ - ŋa
Seis ခြောက် / ၆ - chaukʔ
Siete ခုနှစ် / ၇ - kouN nhit'
Ocho ရှစ် / ၈ - chit ?
Nueve ကိုး / ၉ - ko
Diez တစ်ဆယ် / ၁၀ - thit sai
Once ဆယ့်တစ် / ၁၁ - seʔ titʔ
Doce ဆယ့်နှစ် / ၁၂ - seʔ nhit'
Trece ဆယ့်သုံး / ၁၃ - seʔthouN
Catorce တစ်ဆယ့်လေး / ၁၄ - seʔ léi
Quince တစ်ဆယ့်ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Dieciseis တစ်ဆယ့်ခြောက် / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Diecisiete တစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Dieciocho တစ်ဆယ့်ရှစ် / ၁၈ - seʔ chitʔ
Diecinueve ဆယ့်ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Veinte နှစ်ဆယ် / ၂၀ - nhit sai
Veintiuno နှစ်ဆယ့်တစ် / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Veintidos နှစ်ဆယ့်နှစ် / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Veintres နှစ်ဆယ့်သုံး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Veinticuatro နှစ်ဆယ့်လေး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Veinticinco နှစ်ဆယ့်ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Veintiseis နှစ်ဆယ့်ခြောက် / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Veintisiete နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Veintiocho နှစ်ဆယ့်ရှစ် / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Veintinueve နှစ်ဆယ့်ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Treinta သုံးဆယ် / ၃၀ - thouN sai
Treinta y uno သုံးဆယ့်တစ် / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Treinta y dos သုံးဆယ့်နှစ် / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Treinta y tres သုံးဆယ့်သုံး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Treinta y cuatro သုံးဆယ့်လေး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Treinta y cinco သုံးဆယ့်ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Treinta y seis သုံးဆယ့်ခြောက် / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Cuarenta လေးဆယ် / ၄၀ - léi sai
Cincuenta ငါးဆယ် / ၅၀ - ŋa sai
Sesenta ခြောက်ဆယ် / ၆၀ - chauk sai
Setenta ခုနှစ်ဆယ် / ၇၀ - kouN nhit' sai
Ochenta ရှစ်ဆယ် / ၈၀ - chit ? Sai
Noventa ကိုးဆယ် / ၉၀ - ko sai
Cien တစ်ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Ciento cinco တစ်ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Doscientos နှစ်ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Trecientos သုံးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Cuatrocientos လေးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Mil တစ်ထောင် / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Mil quinientos တစ်ထောင့်ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Dos mil နှစ်ထောင် / ၂၀၀၀ - nhit taung
Diez mil တစ်သောင်း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung